Senetiin Yunaayitid Isteetis Deggersa Doolaara Biliyoona $40 Yukireeniif Akka Kennamu Raggaasise
Caamsaa 20, 2022
Viidiyoo walgahii Seeneetii irraa suuraa fudhatame, Caamsaa 19, 2022
Prezidaantiin Yukireen Volodimiir Zeleniskii ibsa guyyaa guyyaan dhageessisaniin akka jedhanitti senetiin Yunaayitid Isteetis gargaarsa biyya isaaniif kennamu raggaasisuun hooggana cimaan maal akka ta’e kan ibsuu fi waliin taanee walabummaa eegsisuuf illee ni gumaacha jechuu dhaan kamisa kaleessaa dubbataniiru.
Gama biraan ministeerri dhimma alaa Yunaayitid Isteetis Antonii Biliinken kaleessa ibsa kennaniin bulchiinsichi deggersa waraanaa itti dabalaa doolaara miliyoona $100 Yukireeniif ni gumaacha jedhan.
Deggersi sunis meeshaa waraanaa fagoo irraa furguggifamu fi konkolaattota isa baatan 18 akkasumas raadaarii meeshaalee gurguddaan bakka dhukaafamu adda baasu kan of keessaa qabu ta’uu dubbi himaan Pentaagoon Joon Kerbii beeksisaniiru.
Ministeerri ittisaa Raashiyaa kamisa kaleessaa akka beeksisetti, loltoonni Yukireen dhibbaan laka’aman itti dablaa kan marfamee jiru warshaa sibilaa Mariipuul keessa jiru Azoovstaal cinatti argaman harka kennuu isaanii fi kunis torban kana lakkoobsa isaanii 1,730n ga’ee jira.
Koreen fannoo diimaa addunyaa illee loltoota Azovistaal keessaa ba’an galmessaa jiraachuu beeksise.
Angawoonni Yukireen lakkoobsa loltoota Yukireen harka kennatan kan Raashiyaan beeksiste hin mirkaneessine. Yukireen loltoota hidhaman wal jijjiiruuf akka ta’e abdatti, gareen qorannaa Raashiyaa ijoon akka jedhetti immoo yoo isaan siivilota irratti yakka hojjetan ta’e qorachuuf akka ta’e beeksisee jira.
Loltoonni kun qabamuun kan ibsame magaalaa namoota 430,000 qabdu Maripool kan andaara galaana Azoov gama kaabaa jirtu keessatti. Kunis weerara Raashiyaa kan baatilee sadii keessatti milkaa’ina Mooskoo isa guddicha jedhameera.